Blog Posts (7)Discussions (16)EventsGroups Ko Nge's Likes Ko Nge's Friends
စကာင်္ပူပိုးထနေသူတွေအတွက် နိုင်ငံတကာလက်မှတ် CCNA Study Guide!
Credit @ thanhan ပညာရှင်အဆင့် IT Engineer ဆိုတာ Technician and Professional အဆင့်ဆိုပြီးရှိပါတယ်၊ စစချင်းတော့ အလုပ်သင်လူငယ်လေးတွေကို Technician အဆင့်လောက်ဘဲပေးလေ့ရှိပြီး လစာကို ဒေါ်လာ၁၂၀၀ကနေ ၁၈၀၀လောက်ဘဲစပါတယ်၊ နောက် အဆင့် က အဖော်မပါ တယောက်ထဲ ချဲရတဲ့ Professional ကို ဒေါ်လာ၁၆၀၀ကနေ ၂၅၀၀ အများဆုံးပေးလေ့ ရှိပါတယ်၊ ဒီမှာလုပ်သက်ရှိရင်တော့ ပိုရပါလိမ့်မယ် ဒေါ်လာ၃၀၀၀ ပတ်လည်ပေါ့…. ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ကျော် သမားတွေလဲရှိပါတယ်… ဒီလိုတွေက…ContinueTags: နည်းပညာ, ပညာရေး Started Oct 15 မိမိရဲ့gmail မေးအကောင့်ကို Hackerလေးတွေ ဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေပါသတဲ့ဗျာ!
Credit@Ko Nge မိမိနာမည်နဲနဲထွက်လာတာနှင့် မိမိအီးမေးတွေကိုဖောက်ခိုးဖို့ကြိုးစားလာတော့တာဘဲ..MAC က Vurus မရှိသလောက်ပြောကျလို့လေ..အခုတော့ များလိုက်တဲ့ ဟာတွေ…. မိမိမြန်မာဘလော့တွေကြောင့်လားမသိပါဘူး ခိုးတဲ့နိုင်ငံက အမေရိကန်ကနေလာတာတဲ့ဗျာ... ရွှေhacker လေးတွေဘဲဖြစ်မှာပါ….အခုလဲ အီးမေးတွေထဲမှာ ဗိုင်းရပ် sys.bat2.txt(Bat.delfiles-6) နှင့် xxxx.emlx files 57ခုကို email တွေထဲပို့လွှတ်တာဗျာ…ကျွှန်တော်အီးမေးကိုAuto ဖွင့်ထားမိတာကိုး.. 7120.emlx files…ContinueTags: Technology Started Sep 17 နိုင်ငံတကာက အလိုအပ်ဆုံးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမျိုးအစား(၂၀)
Credit@ Ko Ngeအမိမြန်မာပြည်ကရွှေလေးတွေ တောက်လျှောက်မေးလေ့ရှိတတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားမှာဘယ်လိုအလုပ်မျိုးတွေ အလုပ်ရတတ်ကျသလဲ? ဘာတွေပြင်ဆင်လာရမလဲ?အမှန်နိုင်ငံခြားမှက ကိုယ်ကျောင်းပြီးထားတဲ့ ဘွဲ့၊ဒီပလိုမာတွေနှင့်သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဘဲဝင် လုပ်လေ့ ရှိတာကိုး၊ အလုပ်ခန့်တာလဲ ရခဲ့တဲ့လက်မှတ်ကိုကြည့်ပြီးခန့်ကျတာပါ၊ ဒါကြောင့် အမိမြန်မာပြည် ကတော့တမျိုးပါ အသက်မွှေးဝမ်းကျောင်းမဟုတ်တဲ့ ရိုးရိုး B.Sc ဘွဲ့တွေက ဘာနေရမှလုပ်စားလို့မရပါဘူး! သူတို့နှင့် သက်ဆိုင်တဲ့…ContinueTags: အလုပ်အကိုင် Started Apr 11 နိုင်ငံတကာက အလိုအပ်ဆုံးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမျိုးအစား(၂၀)
Credit@ Ko Ngeအမိမြန်မာပြည်ကရွှေလေးတွေ တောက်လျှောက်မေးလေ့ရှိတတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားမှာဘယ်လိုအလုပ်မျိုးတွေ အလုပ်ရတတ်ကျသလဲ? ဘာတွေပြင်ဆင်လာရမလဲ?အမှန်နိုင်ငံခြားမှက ကိုယ်ကျောင်းပြီးထားတဲ့ ဘွဲ့၊ဒီပလိုမာတွေနှင့်သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဘဲဝင် လုပ်လေ့ ရှိတာကိုး၊ အလုပ်ခန့်တာလဲ ရခဲ့တဲ့လက်မှတ်ကိုကြည့်ပြီးခန့်ကျတာပါ၊ ဒါကြောင့် အမိမြန်မာပြည် ကတော့တမျိုးပါ အသက်မွှေးဝမ်းကျောင်းမဟုတ်တဲ့ ရိုးရိုး B.Sc ဘွဲ့တွေက ဘာနေရမှလုပ်စားလို့မရပါဘူး! သူတို့နှင့် သက်ဆိုင်တဲ့…ContinueTags: အလုပ်အကိုင် Started Apr 11 မိမိဘလော့မှာ အုပ်စုဖွဲ့ပြီးဝင်ရေးစေချင်ရင်!
မိမိဘလော့မှာ အုပ်စုဖွဲ့ပြီးဝင်ရေးစေချင်ရင်!We make tools Your make do!Credit@ Ko Ngeဒါလဲဘလော့ဂျာတွေမှာ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာပါ! ဒါလဲနာမည်ရလာတဲ့ ဘလော့တွေမှာ စာဖတ်ပရတ်သတ်တွေ စိတ်ဝင်စားပြီး စာဝင်ရေးချင်တာတွေရှိကျမှာပါနော်! ဒီအတွက် ၀င်ပြီးပညာပေးတွေ၊အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည် ဖလှယ်ချင်ကျတဲ့ သူတွေအတွက် ဒီ Group အုပ်စုတွေက.....အခု နောက်ပိုင်းမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ Social…ContinueTags: နည်းပညာ Started Feb 28 ချစ်သူရည်းစားလေးရှာရင်း ၀င်ငွေရအောင်လုပ်နည်းလေးပါ!
ချစ်သူရည်းစားလေးရှာရင်း ၀င်ငွေရအောင်လုပ်နည်းလေးပါ!We make tools Your make do!အွန်လိုင်းပေါ်မှာဝင်ငွေရှာနည်းလေးများ အပိုင်း(၈)Credit@ Ko Ngeချစ်သူရည်းစားလေးရှာရင်း ၀င်ငွေရအောင်လုပ်နည်းလေးပါ!ဘုရားဖူးရင်းလိပ်ဥပါတူးလို့ရတဲ့နည်းတွေပါ....တခြားပေါက်ကရာမတွေးပါနှင့်သာမန်အွန်လိုင်းတွေမှာလို ရိုးသားစွာ သင်ငွေရှာတဲ့နည်းလေးတွေပါ၊ သူကထူးခြားတာက ၀ါဿနာရင် သင်တို့လဲဝင်ရှာလို့ရတာပါ၊အမိမြန်မာပြည်မှာတော့ အခုလို…ContinueTags: စီးပွားရေး၊ငွေကြေး၊နည်းပညာ Started Feb 16 အွန်လိုင်းတွေမှာဈေးရောင်းကြည့်ရအောင်! အပိုင်း(၃)
အွန်လိုင်းတွေမှာဈေးရောင်းကြည့်ရအောင်! အပိုင်း(၃)Global online shopping platform best offer most bargain! Credit@ Ko Ngeကမ္ဘာကျော် Yahoo ၀တ်လ်ဆိုဒ် ebay က Qoo10 အွန်လိုင်းမှာကိုယ်ပိုင် ဈေးဆိုင်လေး တည်ထောင်ပြီး ဈေးရောင်းလို့ရတဲ့ affiliate လေးအခုလို informatin ခေတ်သစ်တွေမှာ…ContinueTags: စီးပွားရေး၊ငွေကြေး၊နည်းပညာ Started Feb 13 အွန်လိုင်းတွေမှာဈေးရောင်းကြည့်ရအောင်! အပိုင်း(၃)
အွန်လိုင်းတွေမှာဈေးရောင်းကြည့်ရအောင်! အပိုင်း(၃)Global online shopping platform best offer most bargain! Credit@ Ko Ngeကမ္ဘာကျော် Yahoo ၀တ်လ်ဆိုဒ် ebay က Qoo10 အွန်လိုင်းမှာကိုယ်ပိုင် ဈေးဆိုင်လေး တည်ထောင်ပြီး ဈေးရောင်းလို့ရတဲ့ affiliate လေးအခုလို informatin ခေတ်သစ်တွေမှာ…ContinueTags: စီးပွားရေး၊ငွေကြေး၊နည်းပညာ Started Feb 13 View All
Ko Nge shared their discussion on Facebookစကာင်္ပူပိုးထနေသူတွေအတွက် နိုင်ငံတကာလက်မှတ် CCNA Study Guide!Oct 15Ko Nge postedadiscussionစကာင်္ပူပိုးထနေသူတွေအတွက် နိုင်ငံတကာလက်မှတ် CCNA Study Guide!Credit @ thanhan ပညာရှင်အဆင့် IT Engineer ဆိုတာ Technician and Professional အဆင့်ဆိုပြီးရှိပါတယ်၊ စစချင်းတော့ အလုပ်သင်လူငယ်လေးတွေကို Technician အဆင့်လောက်ဘဲပေးလေ့ရှိပြီး လစာကို ဒေါ်လာ၁၂၀၀ကနေ ၁၈၀၀လောက်ဘဲစပါတယ်၊ နောက် အဆင့် က အဖော်မပါ တယောက်ထဲ ချဲရတဲ့ Professional ကို ဒေါ်လာ၁၆၀၀ကနေ ၂၅၀၀ အများဆုံးပေးလေ့ ရှိပါတယ်၊ ဒီမှာလုပ်သက်ရှိရင်တော့ ပိုရပါလိမ့်မယ် ဒေါ်လာ၃၀၀၀ ပတ်လည်ပေါ့…. ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ကျော် သမားတွေလဲရှိပါတယ်… ဒီလိုတွေက…See MoreOct 15 0
Ko Nge postedadiscussionမိမိရဲ့gmail မေးအကောင့်ကို Hackerလေးတွေ ဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေပါသတဲ့ဗျာ!Credit@Ko Nge မိမိနာမည်နဲနဲထွက်လာတာနှင့် မိမိအီးမေးတွေကိုဖောက်ခိုးဖို့ကြိုးစားလာတော့တာဘဲ..MAC က Vurus မရှိသလောက်ပြောကျလို့လေ..အခုတော့ များလိုက်တဲ့ ဟာတွေ…. မိမိမြန်မာဘလော့တွေကြောင့်လားမသိပါဘူး ခိုးတဲ့နိုင်ငံက အမေရိကန်ကနေလာတာတဲ့ဗျာ... ရွှေhacker လေးတွေဘဲဖြစ်မှာပါ….အခုလဲ အီးမေးတွေထဲမှာ ဗိုင်းရပ် sys.bat2.txt(Bat.delfiles-6) နှင့် xxxx.emlx files 57ခုကို email တွေထဲပို့လွှတ်တာဗျာ…ကျွှန်တော်အီးမေးကိုAuto ဖွင့်ထားမိတာကိုး.. 7120.emlx files…See MoreSep 17 0
Ko Nge shared their discussion on Facebookနိုင်ငံတကာက အလိုအပ်ဆုံးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမျိုးအစား(၂၀)Apr 11Ko Nge posted discussionsနိုင်ငံတကာက အလိုအပ်ဆုံးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမျိုးအစား(၂၀)နိုင်ငံတကာက အလိုအပ်ဆုံးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမျိုးအစား(၂၀)နိုင်ငံတကာက အလိုအပ်ဆုံးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမျိုးအစား(၂၀)1 more…Apr 11noyar commented on Ko Nge's blog post အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စီးပွားဖြစ်အဆင့်ထိလုပ်စားလို့ရတဲ့ကျော်ငြာနည်းလမ်းလေးများ"Oမ်းတာပါလယ်"Mar 2Ko Nge postedablog postအွန်လိုင်းပေါ်မှာ စီးပွားဖြစ်အဆင့်ထိလုပ်စားလို့ရတဲ့ကျော်ငြာနည်းလမ်းလေးများအွန်လိုင်းပေါ်မှာ စီးပွားဖြစ်အဆင့်ထိလုပ်စားလို့ရတဲ့ကျော်ငြာနည်းလမ်းလေးများအွန်လိုင်းပေါ်မှာ ၀င်ငွေရှာနည်းလမ်း အပိုင်း(၈)Credit@ Ko Ngeဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာ ၀င်ငွေရှာဖို့တောက်လျှောက်ရေးတင်နေရလဲဆိုတော့ ကျောင်း မပြီးခင်ကတည်းက ကျွှန်တော်မြန်မာပြည် အနှစ်၂၀ လုံးနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဘဲ လုပ်ဖူးတာဆိုတော့ အခုအကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေကြောင့်…See MoreMar21
Ko Nge postedadiscussionမိမိဘလော့မှာ အုပ်စုဖွဲ့ပြီးဝင်ရေးစေချင်ရင်!မိမိဘလော့မှာ အုပ်စုဖွဲ့ပြီးဝင်ရေးစေချင်ရင်!We make tools Your make do!Credit@ Ko Ngeဒါလဲဘလော့ဂျာတွေမှာ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာပါ! ဒါလဲနာမည်ရလာတဲ့ ဘလော့တွေမှာ စာဖတ်ပရတ်သတ်တွေ စိတ်ဝင်စားပြီး စာဝင်ရေးချင်တာတွေရှိကျမှာပါနော်! ဒီအတွက် ၀င်ပြီးပညာပေးတွေ၊အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည် ဖလှယ်ချင်ကျတဲ့ သူတွေအတွက် ဒီ Group အုပ်စုတွေက.....အခု နောက်ပိုင်းမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ Social…See MoreFeb 28 0
Ko Nge added the App YouLyricsFeb 18Ko Nge postedadiscussionချစ်သူရည်းစားလေးရှာရင်း ၀င်ငွေရအောင်လုပ်နည်းလေးပါ!ချစ်သူရည်းစားလေးရှာရင်း ၀င်ငွေရအောင်လုပ်နည်းလေးပါ!We make tools Your make do!အွန်လိုင်းပေါ်မှာဝင်ငွေရှာနည်းလေးများ အပိုင်း(၈)Credit@ Ko Ngeချစ်သူရည်းစားလေးရှာရင်း ၀င်ငွေရအောင်လုပ်နည်းလေးပါ!ဘုရားဖူးရင်းလိပ်ဥပါတူးလို့ရတဲ့နည်းတွေပါ....တခြားပေါက်ကရာမတွေးပါနှင့်သာမန်အွန်လိုင်းတွေမှာလို ရိုးသားစွာ သင်ငွေရှာတဲ့နည်းလေးတွေပါ၊ သူကထူးခြားတာက ၀ါဿနာရင် သင်တို့လဲဝင်ရှာလို့ရတာပါ၊အမိမြန်မာပြည်မှာတော့ အခုလို…See MoreFeb 16 0
Ko Nge posted discussionsအွန်လိုင်းတွေမှာဈေးရောင်းကြည့်ရအောင်! အပိုင်း(၃)အွန်လိုင်းတွေမှာဈေးရောင်းကြည့်ရအောင်! အပိုင်း(၃)Feb 13Ko Nge postedadiscussionအွန်လိုင်းပေါ်မှာဈေးရောင်းခြင်း အပိုင်း(၂)အွန်လိုင်းပေါ်မှာဈေးရောင်းခြင်း အပိုင်း(၂)We make tools Your make do!Credit@ Ko Ngeအွန်လိုင်းပေါ်မှာ တရုတ်ပြည်က လက်လီလက်ကား ရောင်းတဲ့…See MoreFeb 12 0
lovealone commented on Ko Nge's blog post IT ခေါ် ကွန်ပျူတာနည်းပညာဆိုတာ ဘယ်လိုအလုပ်တွေလဲ? အပိုင်း(၁)"တင်ပြသွားတာလေးတွေကောင်းပါတယ်"Jan 14lovealone liked Ko Nge's blog post IT ခေါ် ကွန်ပျူတာနည်းပညာဆိုတာ ဘယ်လိုအလုပ်တွေလဲ? အပိုင်း(၁)Jan 14Ko Nge postedablog postအွန်လိုင်းတွေမှာဈေးရောင်းကြည့်ရအောင်! အပိုင်း(၁)အွန်လိုင်းတွေမှာဈေးရောင်းကြည့်ရအောင်! အပိုင်း(၁)အွန်လိုင်းတွေမှာဈေးရောင်းကြည့်ရအောင်!ကဲ! အွန်လိုင်းကအပေါင်းအသင်းများအတွက်ဝမ်းသာစရာလေးတခုလေးပါဘဲ?အွန်လိုင်းပေါ်က မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝတ်လ်ဆိုဒ်တွေမှာဈေးရောင်းပြီး ၀င်ငွေရှာလ်ို့ရတဲ့ဝတ်လ်ဒီဇိုင်းဆိုဒ်လေးပါ၊…See MoreJan20
Ko Nge posted discussionsမြန်မာအွန်လိုင်း ကျော်ငြာနှင့် မိတ်ဖက်ကွန်ရက်!မိမိရဲ့ဘလော့ကိုတန်ဖိုးဖြတ်ကြည့်ခြင်းNov 25, 2012 More... RSS
Continue IT ခေါ် ကွန်ပျူတာနည်းပညာဆိုတာ ဘယ်လိုအလုပ်တွေလဲ? အပိုင်း(၁)
Posted on September 2, 2012 at 3:30pm 1 Comment
IT ခေါ် ကွန်ပျူတာနည်းပညာဆိုတာ ဘယ်လိုအလုပ်တွေလဲ? အပိုင်း(၁)
အခုလက်ရှိ ခေတ်သစ်နည်းပညာ စီပွားရေးလောကတွေမှာ အသက်မွှေးဝမ်းကျောင်းအလုပ် တွေကို လုပ် ကိုင်နေရတာ…
Continue လူငယ်တွေရဲ့ကွန်ပျူတာဂိမ်းစွဲနေမှုကို မိဘတွေသိထားဖို့လိုတဲ့ အရေးကြီးသော(၁၀)ချက်
Posted on August 20, 2012 at 11:00am0Comments
လူငယ်တွေရဲ့ကွန်ပျူတာဂိမ်းစွဲနေမှုကို မိဘတွေသိထားဖို့လိုတဲ့ အရေးကြီးသော(၁၀)ချက်